Allgedo.com » Islam
Horudhac Mar aan tagay asbuuci hore magaala London ayaa waxaan la kulamay goob lagu iibinayo Buuga “Xadka Riddada maxaa ka run ah” ee uu qo ray Cabdisaciid Cabdi Ismaaciil. Waxaan aqriyay buugii, aqris dabadi waxaa isoo wacay labo maalim kadib qoraaga maqaalka “Gar garaad goobaysa” oo iisheegay inuu maqaal ka qoray buuga, kuna faafiyay baraha internetka, oo ay u dheer tahay inuu waliba...
Waxaa sanadahan dambe aad u soo baxay marka la rabo in la iibiyo badeeco in loo sameeyo suuq gayn, oo mararka qaarkood shirkadaha xafiiska wax iibinta waxaa uga qarash badan xafiiska suuqgaynta, macnaha iyo ujeedada looga danleeyahayna waa cadahay oo waa in dad badan ay badeecadaas ama khadamaadkaas ay isticmaalaan. Waxaad mooda in dacwada faafinteeda ay uga mudantahay in loo sameeyo suuq gayn si...
Duuliye Asli Xasan Cabaade “Calansida” ayaa inoo soo gudbisay magacyada malaa’igta iyo shaqooyinkooda: 1- Jibriil (c.s.) waa Malagga loo wakiishay Waxyiga, waana Sayidka Malaa’ igta, waana Malag aad u Quwad badan, Carshiga Allaah (s.w.t.) ayuuna u dhawyahay, waana Aamin, Malaa’ igtana Asaga ayey ka’ amar qaataan. 2- Miikaa’iil (c.s.) waa Malagga loo wakiishay...
Rustenbur, RSA (AOL) – Waxaa maalintii shalay oo axad ahayd, 12ka ramadaan kuna beegnayd July 21, 2013, 11ka iyo barkii barqanimo booqasho dacwadeed ku tagay magaalada Rustenburg oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ee dalka Koofur Afrika, una jirta jirta magaalada Johannesburg oo ay ku taalo xarunta majliska Albayaan 112km wafdi isugu jira culimo iyo ducaad ka tirsan golaha dacwada ee Albayaan. Wafdigaas...
Balad-xaawo, Somalia (AOL) – Gudiga Dhismaha Masjidka Khadiim ee Magaalada Baladxaawo ayaa waxay ka warbixiyeen howsha Dhismaha Masjidkaasi oo ay sheegeen in haatan uu marayo wejigii labaad ee Dib u dhiska Masjidka oo howshiisa la bilaabay mudo haatan laga joogo ilaa 6 Bilood, waana Masjid laga doonayo in laga dhigo ilaa Labo Dabaq. Halkaan ka dhageyso Sheekh Cabdulaahi Khaaje oo ka warbixinaya...
Waxaa caawa oo Abaco ah soona galayso Khamiis, bishana ay tahay Juun 19, 2013 lagu soo gabagabeeyay masjidka Imaamu Shaafici ee ku yaalo magaalada Johannesburg ee dalka Koofur Afrika Dowro socotay sedex habeen, dowradaas oo uu aqrinaayay Sheikh Maxamuud Sheikh Maxamed Shibli ayaa waxay ku saaabsaneed kitaabka qawaacidul fiqhiya uu alifay allaha u naxariistee Al-callamah C/raxmaan Ibnu Sacdi. Dowrada...
Gudiga Dhismaha Masjidka Khadiim ee Magaalada Baladxaawo ayaa waxay ka warbixiyeen howsha Dhismaha Masjidkaasi oo ay sheegeen in haatan marayo wejigii labaad ee Dib u dhiska Masjidka oo howshiisa la bilaabay mudo haatan laga joogo ilaa Seddex Bil, waana Masjid laga doonayo ilaa Labo Dabaq in laga dhigo,iyadoo Dabaqii labaadna la bilaabayo maalmaha soo socda. Dhageyso Sheekh Cabdirashiid Qudus...
Waxaa safar dacwadeed ku yimid dalkan Koofur Afrika habeenkii jimcada soo galaysay markay saacadu ahayd 12:14 AM, 14/06/13 Sheekh Maxamuud Sh. Maxamed Shibli iyo Sheikh C/raxiim Abulcaynayn, labada sheekhba waxay ka mid yihiin culimda Somaalida ee caanka ka ah dalka Kenya iyo guud ahaan dhulka Soomalida ay degto ama ay u qaxday. Sheikh Maxamuud Shibli xaruntiisa waa Nairobi sida lawada ogyahayba,...
Barnaamijyo dacwadeed oo ay culumo ka wadeen magaalada Garowe oo caawa la soo gabagabeeyey
Garoowe, Somalia (AOL) – Wafdigii culumada ee booqashada ku yimid magaalada Garowe waxay xalay ku qabteen masjidka Al-hudaa Nadwo cinwaankeedu ahaa: Maalgashiga mawsimka dacwadeed (kaalimaha iyo mashaariicda), waxaana ka qaybgalay Sh. Yuusuf Aadan iyo Sheekh C/naasir. Nadwada ka dibna waxay dhalinyarada Soomaaliyeed kala hadleen khatarta iyo xaaraanimada TAHRIIBKA. Saakay waxay culumadu soo...
Johannesbur, South Africa (AOL) – Waxaa maalintii khamiista oo bisha ahayd 06/06/13 bacdal maqrib lagu qabtay magaalada Johannesburg gaar ahaan markazka albayaan kulankii ducaada, kulankaas oo ahaa kii sedexaad oo la qabto, ayaa waxaa looga hadlaayay horumarinta dacwada iyo katashiga arimaha dacwada quseeyo, kulankaan oo ay soo qaban qaabiyeen gudiga dacwada gobolka Gauteng ee Johannesburg ka...